4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0) - APICMO
ထုတ်ကုန်များ > 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0)
, ထုတ်လုပ်ရန် synthesize နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအောက်မှာအရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ဖြင့် 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0) ၏အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်း
SKU: 71759-87-0 အမျိုးအစား: သည်အခြားဒြပ်ပေါင်းများ
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0) တွက်ချက်ဂုဏ်သတ္တိများ
XLogP3-AA ကို 0.7
Monoisotopic Mass 207.95 g / mol
အတိအကျ Mass 207.95 g / mol
Topological အရောင်အသွေးစုံ Surface ကဧရိယာ 17.8 တစ် ^ 2
CACTVS Substructure Key ကိုလက်ဗွေ AAADcYBjAAAAAgAAAAAAAAAAAAAAAWAAAAA
မော်လီကျူးအလေးချိန် 208.002 g / mol
အဘို့အ 1 ပြန်လည်သုံးသပ် 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0)
Apicmo.com မှာကျနော်တို့ပေါင်းစပ်, လုပ်ငန်းစဉ်နှင့် CGMP ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစည်းမျဉ်းများ, အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုစနစ်တင်းကြပ်သောလိုက်နာမှုအတွက် 71759-87-0,4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole ၏အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးတွေကိုထုတ်လုပ်။ ကျနော်တို့အများဆုံးခေတ်သစ်နည်းပညာကိုအသုံးပြုခြင်းမှတဆင့်ဒီလုပ်ပါ။ ကျနော်တို့ 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole, 71759-87-0 ၏အသေးစားနှင့်အမြောက်အမြားထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole Applications ကို
CAS အဘယ်သူမျှမ .: 71759-87-0 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole သတ်မှတ်။ ၎င်း၏ဘုံဓာတုနာမကိုအမှီကို C အဖြစ်က၎င်း၏မော်လီကျူးပုံသေနည်းတွေနဲ့ 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole ဖြစ်ပါသည်4H5IN2.
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole ဓာတုဓါတ်ကူပစ္စည်းပေ (positron ထုတ်လွှတ် tomography) ၏ထုတ်လုပ်ရာတွင်အသုံးပြုသည်ဦးနှောက်အင်ဇိုင်းတွေ imaging ကာလအတွင်းလိုအပ်သော tracers ။
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole လည်း 4-Iodo-I-methyl-1H-imidazole အဖြစ်လူသိများသည်, 4-iodo-1-methylimidazole; 4-iodo-1-methyl-imidazole; 1H-Imidazole, 4-iodo-1-methyl-; 4-iodo-1-methyl-1-H ကို-imidazole; သို့မဟုတ် 1-methyl-4-iodoimidazole ။
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0) ဘေးကင်းမှုလုပျထုံးလုပျနညျး
ဤရွေ့ကားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးတင်းကြပ်စွာ 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အခါတိုင်းမှလိုက်နာရပါမည်;
§အမြဲတမ်းအကာအကွယ်ဂီယာအပေါ်ချပြီးနေဖြင့်အပြည့်အဝကိုသင်၏မျက်နှာ, မျက်စိနှင့်အရေပြားကာကှယျ။ သင်၏မျက်နှာကိုဖုံးလွှမ်းရန်သင်၏မျက်စိနှင့်မျက်နှာမျက်နှာဖုံးများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့, အထူး / အဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးစက်မှုဇုန်လက်အိတ်ကို အသုံးပြု. သင်၏လက်ကာကွယ်ပါ။
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole နှင့်ဆက်စပ်သောမည်သည့်အငွေ့, ဖုန်မှုန့်, သဘာဝဓာတ်ငွေ့, ရေမှုန်ရေမွှား, အခိုးအငွေ့သို့မဟုတ်အခိုးအငွေ့ဓာတ်များကိုရှောင်ရှားရန်နှာခေါင်းမျက်နှာဖုံးများဆွဲဆောင်§။ ရေတွင်းတစ်တွင်း-လေဝင်လေထွက်အခန်းထဲမှာသို့မဟုတ်အိမ်ပြင် 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole သာလျှင်အသုံးပြုပါ။
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0) ဘေးအန္တရာယ်သတ်မှတ်ခြင်း
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole အသားအရေအဆက်အသွယ်၏အမှု၌လေးနက်အသားအရေယားယံ / ချေးထားသည်§။
ကမျက်စိထဲမှာရရှိသွားတဲ့ အကယ်. §, 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole လက်ငင်းအကျိုးသက်ရောက်မှုမျက်စိယားယံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အချို့သောမိနစ်ပဒေသာရေနှင့်အတူသတိမကျြစိကိုဆေး။ အမှု၌သင်တို့ကို, ကိုဖယ်ရှားနိုင်အောင်လုပ်ပေးတော်တော်များများနှင့်ပိုပြီးမိနစ်လက်မဆေးကိုဆက်လက်ရန်လွယ်ကူဖြစ်ကြောင်းအဆက်အသွယ်မှန်ဘီလူးဝတ်ဆင်။
၏ရှူရှိုက်မိခြင်း 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazolecan အကြောင်းမရှိအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာယားယံ§။ အငွေ့, ဖုန်မှုန့်, အငွေ့, ရေမှုန်ရေမွှား, ဓာတ်ငွေ့သို့မဟုတ် 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole အပြည့်အဝကိုရှောင်ရှားသင့်ပါတယ်၏အခိုးအငွေ့။ သငျသညျပွငျးထနျအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါလက္ခဏာများကိုခံစားချက်ချင်းဆရာဝန်တစ်ဦးသို့မဟုတ်အဆိပ်စင်တာကိုဆက်သွယ်ပါ။
ပါဝင်ပစ္စည်းများ / ရေးစပ်သီကုံးမှု၏ 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole သတင်းအချက်အလက်
ပါဝင်ပစ္စည်းများအမည်: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole ။
71759-87-0, 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole Synthesis လမ်းကြောင်း
ရှူရှိုက်မိပါလျင်မြန်စွာကောင်းစွာတစ်လေဝင်လေထွက်အခန်းရွှေ့သို့မဟုတ်လတ်ဆတ်တဲ့လေကောင်းလေရှာကြာလော့။ ဆိုးရွားသောရောဂါလက္ခဏာတွေ၏အမှု၌ဆေးကုသ / စောင့်ရှောက်မှုရှာကြလော့။
မျက်လုံးချင်း: ထိုခဏခြင်းတွင် (သက်ဆိုင်သောဖြစ်ပါတယ်ကိုမဆို) မျက်ကပ်မှန်သို့မဟုတ်ကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီးကိုဖယ်ရှားနှင့်ရေပေါများပမာဏနှင့်အတူ 15 မိနစ်ထက်မနည်းအဘို့အစဉ်မပြတ်မျက်စိအသားအရေဆေးကြောပါ။ ညင်ညင်သာသာအလုံအလောက်ရေထှကျသှားမျက်စိသေချာစေရန်မျက်တောင်ခွဲခြားရန်လက်ချောင်းများကိုအသုံးပြုပါ။ persistent ယားယံ၏အမှု၌ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရှာကြလော့။
အရေပြားအဆက်အသွယ်: ချက်ချင်းပင်ပိုးဖိနပ်များနှင့်အဝတ်အစားကိုဖယ်ရှား, ပြီးတော့ရေပေါများပမာဏအနည်းဆုံး 20 မိနစ်အရေပြားဆေးကြောပါ။ ယားယံဆက်ရှိနေသေးလျှင်ချက်ချင်းဆေးကုသရှာကြလော့။
စားသုံးမိပါ: 15 မိနစ်နိမ့်ဆုံးရေပမာဏနှင့်အတူချက်ချင်းပါးစပ်ထွက်ဆေး။ နောက်ပိုင်းတွင်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာအာရုံကိုရှာကြာလော့။
ဖြစ်စေ, တစ်ခုတည်းကိုသာသို့မဟုတ်အခြားပစ္စည်းများ / ဓာတုပစ္စည်းနှင့် တွဲဖက်. , 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်တစ်ဦးမီးအဖြစ်အပျက်အတွက်ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်သို့မဟုတ်အခြောက်အမှုန့်မီးသတ်ဘူးအသုံးပြုခဲ့နိုင်ပါသည်။ အကာအကွယ်ဂီယာနှင့်လွတ်လပ်သောအသက်ရှူ gadgetry ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကြိုတင်ကာကွယ်မှုများ: အမြဲတမ်းကျေနပ်ဖွယ်စွမ်းဆောင်နှင့်အမျိုးသားပြန်လည် / ဒေသခံပြည်နယ် / စံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူအသုံးအနှုန်းများသည်သင့်လျော်သောပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများအပေါ်ထားတော်မူ၏။
လက်ကြိုတင်ကာကွယ်မှု: selection မထိုက်မတန်လက်အိတ် / စိန်ခေါ်ဝတ်ဆင်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်မှု: သင် 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အတည်ပြုအသက်ရှူကိရိယာ / maskwhen ဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
spillage ၏အမှု၌ထိုကဲ့သို့သောသဲလုံးနှင့်အမျှအာဂွန်စုပ်ပစ္စည်းနှင့်အတူ, mix4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole, မြေမှုန့်ကိုချွတ်ခြင်းနှင့်စွန့်ပစ်ခြင်းများအတွက်တင်းကျပ်စွာ lidded ကွန်တိန်နာထဲမှာတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။
သင်သည်မည်သည့်အခြေအနေအောက်တွင်မပေးသင့်ပါတယ်ရေသင်တန်းများသို့မဟုတ်ရေနုတ်မြောင်းသို့ 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole ခွင့်ပြုပါ။
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0) သိုလှောင်ရေးနှင့်ကိုင်တွယ်မှု
ကိုင်တွယ်: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole သာ, နေဖြင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းသို့မဟုတ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားထဲသို့မီးယူပြီးနိုင်စွမ်းစနစ်တကျအရည်အချင်းပြည့်မီခြင်းနှင့်ဖြစ်ကောင်းအန္တရာယ်ရှိသောဓာတုပစ္စည်းများအသုံးပြုခြင်းနှင့်ကိုင်တွယ်ခြင်းအတွက်သတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း, ပုဂ္ဂိုလ်များ, အလွန်နီးကပ်ကြီးကြပ်မှုအောက်မှာစီမံခန့်ခွဲရပါမည် ဒီအထူးသဖြင့်အကြောင်းအရာထဲမှာဖော်ပြထားအဖြစ်ဓာတုနှင့်ကျန်းမာရေးအန္တရာယ်ဒေတာ။
သိုလှောင်မှု: ဂရုတစိုက်ရေခဲသေတ္တာ, တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပိတ်ထားရေယာဉ်များအတွက်သိမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကာကွယ်မှု / Exposure ထိန်းချုပ်မှုများ
အင်ဂျင်နီယာထိန်းချုပ်မှုများ: Use4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole ဓာတုအငွေ့ပါးပျဉ်းအတွက်ပူးတွဲစဉ်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာများ: အမြဲတမ်းဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာမျက်မှန်ကိုတပ်ပြီး, ဓာတ်ခွဲခန်းအဝတ်အစားများနှင့်ဓာတု-ခံနိုင်ရည်လက်အိတ်ပေါ်မှာထားတော်မူ၏။
အထွေထွေသန့်ရှင်းရေးအစီအမံ: ကိုင်တွယ်ပြီးနောက်နှံ့နှံ့စပ်စပ်လက်ဆေးသေချာစစ်ဆေးပါ။ ပြန်သုံးမီနှင့်အပြီးပိုးအဝတ်အစားကိုရှင်းလင်း။
ပျော်ဝင်: Dichlomethane နှင့် Methanol အတွက်အနည်းငယ်ပျော်ဝင်။
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0) တည်ငြိမ်ရေးနှင့် reactivity ကို
တိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်သွယ်ဝိုက်အပူ, မီးတောက်နှင့်မီးစများ၌၎င်းရှောင်ကြဉ်ပါ: ရှောင်ရှားရန်အခွအေန။
ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်ရှိသောလောင်ကျွမ်းခြင်းထုတ်ကုန်: နိုက်ထရိုဂျင်အောက်ဆိုဒ်, ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုဒ်, ဟိုက်ဒရိုဂျင် iodide ။
acute အဆိပ်: အဘယ်သူမျှမဒေတာမရရှိနိုင်ပါ။
အသားအရေချေး / ယားယံ: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole အသားအရေယားယံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မျက်စိပျက်စီးမှု / ယားယံ: ဒါဟာပြင်းထန်မှုအတွက်မျက်စိပျက်စီးမှုဖြစ်နိုင်ခြေနှင့်အတူအဓိကမျက်စိယားယံကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ကင်ဆာ: သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအာဏာပိုင် (EPA) မှ 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole ၏ဖြစ်နိုင်သောကင်ဆာဂုဏ်သတ္တိများအပေါ်ရရှိနိုင်မပါခွဲခြားဒေတာ, ကင်ဆာသုတေသနနိုင်ငံတကာအာဏာပိုင် (IARC), အလုပ်အကိုင်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု (OSHA) ရှိပါတယ် အလုပ်အကိုင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကနျြးမာရေး (ACGIH) တိုးတက် orAssociation ။
မျိုးပွားမှုဆိုင်ရာအဆိပ်အတောက်: 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole မျှလူသိများသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
တိကျသောပစ်မှတ်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေကိုစနစ်ကအဆိပ်အတောက် - ထိတွေ့မှုအကြိမ်ကြိမ်: အဘယ်သူမျှမလူသိများသက်ရောက်မှု of4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ toxicological, 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဓာတုဂုဏ်သတ္တိများ investigatedthoroughly ခဲ့ကြပြီမဟုတ်။
သငျသညျဒေသတွင်းနှင့်အမျိုးသားရေးစည်းမျဉ်းများထည့်သွင်းစဉ်းစားအတွက်ဒေသခံ / ပြည်နယ်စွန့်ပစ်စွန့်ပစ်ခြင်းအခွင့်အာဏာနှင့်အတူသင့်လျော်သောစဉ်းစားအတွက်တစ်လိုင်စင်ရစွန့်ပစ်ခြင်းကုမ္ပဏီမှတဆင့် 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (အထူးစွန့်ပစ်ကဲ့သို့) ၏စွန့်ပစ်ခြင်းများအတွက်အထူးအစီအမံကိုလုပ်သင့်ပါတယ်။
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးသတင်းအချက်အလက်
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole မျှအန္တရာယ် intransportation ရှိပါတယ်, ဒါကြောင့်လေထုသို့မဟုတ်မြေပြင်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြစ်လိမ့်မည်။
ဤနေရာတွင်ထုတ်ဖော်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုအဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်အတိအကျထည့်သွင်းစဉ်းစားသည်, လိုအပ်သောပြည့်စုံသတင်းအချက်အလက်ရောင်ပြန်ဟပ်ပေမယ့်ဧည့်လမ်းညွှန်အဖြစ်ပေးထားပါဘူး။ အသုံးပြုသူဒီထုတ်ကုန်ကိုင်တွယ်သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ခြင်းထံမှထွက်ပေါ်လာတဲ့ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဒဏ်ရာဘို့တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်ရှိသည်။
Apicmo မှာကျနော်တို့ကျွမ်းကျင်နှင့်ဓာတုပေါင်းစပ်, ပစ္စည်းသိပ္ပံ, ဘဝသိပ္ပံ, အခြားသူတွေအကြား Chromatography အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသုတေသနနယ်ပယ်များတွင်ကြုံတွေ့သိပ္ပံပညာရှင်များ, တစ်ဦးကြီးများအသင်းရှိသည်။
4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole (71759-87-0) အစုလိုက်အမိန့်နှင့်စျေးနှုန်း
သင်သည်သင်၏စက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်ငန်း, သုတေသနသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အမြောက်အမြားလိုအပ်နေပါသလား? ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုအသင်းကအရမ်းကြိုဆိုပွဲနှင့်ဖော်ရွေသည်။ အမိန့်နေရာကသူတို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
လျူ, P. et al ။ ACS Med ။ Chem ။ လက်တ။ , 4, 509 (2013)
ဇီဝနည်းပညာသတင်းအချက်အလက်, အမေရိကန်သည်အမျိုးသားလုံခြုံရေးရေးစင်တာ။ ဆေးပညာ, Pubchem အမျိုးသားစာကြည့်တိုက်, 4-Iodo-1-methyl-1H-imidazole, ကဏ္ဍများ 1-7 ။
Friedrich Konrad Beilstein, Beilstein သတင်းအချက်အလက်, 1994 - ဓာတုဗေဒ, အော်ဂဲနစ်, စာမျက်နှာ 2436 ။